तिमीले देख्यौ ?
हेरेकी थिइन ।
आँखा कहाँ थियो ?
मन भित्र म छु र ?
ध्यान कहाँ थियो ?
70-466 dumps 70-293 certification CompTIA 220-802 vcp-510 exam dumps
अन्त कहां यो शास्वत हो ।
मैले झूठ हो कहाँ भने ।
झूठ बोलीमा हुन्छ
हैन भावनामा ।
साँच्ची भावना के हो ?
मेरी दिदी ।
अस्ति देखेको थिएँ दिदीलाई
भन्नु भएन ।
भनेको पनि छैन
के कुरा ?
तिमी सुन्न चाहन्नौ ।
सुनेर के हुन्छ ?
हो तिमीलाई छुँदैन ।